ခရီးသွား | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်သောလူအများအမျိုးအစားရှိသည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ထောင့်အသစ်များသို့အစဉ်မပြတ်သွားရောက်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ အမှန်တကယ်ကောင်းကင်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ ဤသည်ကာတာလို့ခေါ်တဲ့သေးငယ်ပေမယ့်အံ့သြဖွယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်…
Chundzha ရေပူစမ်း - တက်ကြွမှုကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခု
ကာဇက်စတန်၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးတမူထူးခြားသည့်နေရာများစွာရှိသည်။ ဒီနေရာတွေထဲကတစ်ခုက Chundzha ရွာလေးပါ။ ဘာနဲ့လဲ…
Azov ပင်လယ်ပြင်: ကမ်းရိုးတန်း, ဝိသေသလက္ခဏာများ, အင်္ဂါရပ်တွေ
ဥရောပအရှေ့ပိုင်း၊ ယူကရိန်းတောင်ပိုင်း၊ ရုရှားအနောက်ပိုင်းနှင့်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်၏မြောက်ဘက်အကြားသမကျသောတိုက်ကြီးဇုန် (စတက်လွင်ပြင်နှင့်သစ်တော - စတက်လွင်ပြင်ဇုန်) တွင်အဇော့ပင်လယ်သည်တည်ရှိသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒါမှမဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရဲ့ ...
မိုင်ယာမီဖလော်ရီဒါ: ဆွဲဆောင်မှုဓာတ်ပုံ။ မိုင်ယာမီဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ရုံးပိတ်ရက်
ဒီနေ့နေသာတဲ့မြို့မိုင်ယာမီ (ဖလော်ရီဒါ) ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်။ ဤမြို့သည်အမေရိကရှိပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံ၏အဓိကအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ အံ့သြဖွယ်သဘာဝ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောကမ်းခြေများ၊
အဘယ်မှာရှိမော်စကိုဆောင်းရာသီ၌ကျင်လည်သလော မိုဃ်းပွင့်မြို့တော်ကဘာလဲ? မြို့အသောနေရာများနှင့်မြင်ကွင်းများ
လူအများအပြားသည်မော်စကို၏အဓိကမြင်ကွင်းများကိုကြည့်ရှုရန်မြို့တော်သို့အဆက်မပြတ်လာကြသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်၊ အခြားအချိန်အခြားအချိန်များကဲ့သို့ပင်အနီရောင်ရင်ပြင်ရှိကျော်ကြားသောအဖွဲ့များကိုတွေ့နိုင်သည်၊ Bolshoi ပြဇာတ်ရုံနှင့်အခြားသူများသို့လည်ပတ်နိုင်သည်။
ဘာစီလိုနာမှ Salou ထံမှရရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? အဆိုပါ Salou ကနေဘာစီလိုနာမှအကွာအဝေးနှင့်မည်မျှကြောင့်ခရီးသွားကုန်ကျမည်ကဘာလဲ?
Salou သည် Spanish Costa Dorada တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိသားစုများအပြင် adrenaline ငတ်သောလူငယ်များနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှစ်သက်သူများအတွက်သင့်လျော်သည်။ PortAventura ပန်းခြံဟာကြီးမားလှတဲ့ ...
အငယ်တန်း Suites: ကဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်အငယ်တန်းအစုအဖွဲ့ကဲ့သို့သောစကားစုကိုမကြာခဏတွေ့ကြုံတတ်ကြသည်။ ဒါဘာလဲ? သင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာ၎င်းသည်ဟိုတယ်များရှိအခန်းအမျိုးအစားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များ၏လူကြိုက်များ ...
"ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသဟဇာတဖြစ်မှု" - ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးကှနျ့
“ Harmony of the Seas” သင်္ဘောသည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသင်္ဘောဖြစ်သည်။ ဒီအိုအေစစ်အဆင့်အတန်းဟာ ၃၆၂.၁၂ မီတာရှည်ပြီး ၆၆ မီတာကျယ်သည်။ အမြင့် ...
cit နှင့်အတူနယူးမော်စကိုမြေအောက်မြေပုံ: အပိုလွယ်ကူလှည့်ပတ်ရွှေ့ဖို့မူမည်လော
မြို့တော်ရှိမက်ထရိုအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသည်။ ဘူတာအသစ်များနှင့်လိုင်းများကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ၎င်းသည်မြို့နှင့်ဆင်ခြေဖုံးဒေသအမျိုးမျိုးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်တစ်ခုသို့ပေါင်းစည်းရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ Metro သည်areaရိယာတစ်ခုမှမြန်မြန်ရရန်ခွင့်ပြုသည်။
အလုပ်လုပ်သည့်နိုင်ငံသားအားလုံးသည်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပုံမှန်အားလပ်ရက်များယူခွင့်ရှိသည်။ မသင်မနေရခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောအဓိကပြprovisions္ဌာန်းချက်များကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအလုပ်သမားရေးရာဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၄-၁၂၈ ဖြင့်ပြဌာန်းထားသည် အနုပညာ ၁၂၂ က ...
Waterpark "Baryonyks": စျေးနှုန်းများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Kazan ရှိ Baryonyx ရှိ Aquapark
ကာဇန်းတွင်အရသာနှင့်ဘတ်ဂျက်တိုင်းအတွက်ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဒေသခံများသည်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုမည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်နည်းနှင့်နီးနီးကပ်ကပ်မရှိ။ မိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာတွင်သွားရမည်ကိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ တစ်ခု
တစ်ဦး Schengen ဗီဇာလက်ဗွေနှိပ်ခံရဖို့အဘယ်မှာရှိသနည်း တစ်ဦး Schengen ဗီဇာရယူဘို့နယူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ: လက်ဗွေရာ
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်မှစ၍ Schengen ဗီဇာအတွက်ရုရှားနိုင်ငံသားများအားလက်ဗွေရာယူရမည်။ biometric အချက်အလက်တင်ပြခြင်းကိုလူတိုင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ လက်ဗွေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြည်နယ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးများ၊ ခွင့်ပြုထားသောဗီဇာစင်တာများတွင်ပြုလုပ်သည်။
Anapa - Vityazevo လေဆိပ်။ ဓာတ်ပုံ၊ လိပ်စာ၊ အကွာအဝေး
Vityazevo သည် Krasnodar နယ်မြေတွင်တည်ရှိသည့်ဖက်ဒရယ်အရေးပါသည့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီလေဆိပ်ဖြစ်သည်။ လိပ္စာ Vityazevo လေဆိပ်သည် Anapa မြို့တွင်တည်ရှိပြီး Anapa မီးရထားဘူတာမှ (၅ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိနေသည် (လေယာဉ်ကွင်းသည်အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး) နှင့် ...
Ilmen (အိုင်): အပန်းဖြေ, ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အရှေ့ဥရောပလွင်ပြင်၏အနောက်မြောက်တွင်ဒဏ္legာရီဆန်။ လှပသော Ilmen ရေကန်တည်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည့် Novgorod ဒေသသည် Pskov နှင့် Tver မြေများနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊ တံငါသည်များနှင့် ...
multivisa ကဘာလဲ? တစ်ဦး Schengen multivisa ရရှိရန်မည်သို့
နိုင်ငံခြားသို့မကြာခဏသွားလေ့ရှိသောသူများသည် multivisa ဆိုသည်ကိုသိရန်သာလိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာနိုင်ငံခြားခွင့်ပြုချက်ပါ ၀ င်ခွင့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခု၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်…
ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးဆုံးလေဆိပ်။ ရုရှား၌အကြီးဆုံးလေဆိပ်။ ဥရောပမှာအကြီးဆုံးလေဆိပ်
ခရီးရှည်တစ်ခုသည်စွမ်းအင်များစွာလိုအပ်သောကြောင့်လူများသည်လေကြောင်းလိုင်းများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုး။ ရယူကြသည်။ ခရီးသည်တစ် ဦး သည်သူ၏လေယာဉ်နှောင့်နှေးနေစဉ်အခြေအနေတစ်ခုကိုကြုံတွေ့ရသည်မှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။ ထို့နောက်လေကြောင်းလိုင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအား ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားအစားအစာပေးရမည်။
ရဲ့မည်မျှကီလိုမီတာ Rostov ထံမှရိုင်းဖို့အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့
ယခုနှစ်အစတွင်ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရော့စ်စဘတ်မှခရိုင်းမီးယားသို့မည်မျှကီလိုမီတာမည်မျှရောက်ရှိနေသည်ဟူသောမေးခွန်းကိုအထူးသဖြင့်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုရုရှားတွင်ထည့်သွင်း ...
ကနေဒါသည်မြောက်အမေရိကရှိယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဘာသာစကားများကိုစည်းလုံးစေသောပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နယ်မြေအားဖြင့်တိုင်းပြည်သည်ရုရှားပြီးလျှင်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာကြီးတွင်ပြtheနာ၏ဆက်စပ်မှုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလူတို့သည်ဤကမ္ဘာသို့ပင်မလာကြပါ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ... ဘယ်နိုင်ငံလဲ။ သူမဘယ်မှာရှိသလဲ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်? ဒီဟာကဘယ်နိုင်ငံလဲ သူမဘယ်မှာလဲ? " - ဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုမကြာခဏကြားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ပထဝီအနေအထားအရစာမတတ်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူများအားအလျင်အမြန်စီရင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သဘောတူနိုင်သည့်အလွန်သေးငယ်သောအခြေအနေအကြောင်းသဘောတူပါ
မော်စကိုသတို့သမီး Suite: ခြုံငုံသုံးသပ်, အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုသည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့်ကျင်းပသောပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့သည်မင်္ဂလာဆောင်များအတွက်အထူးဖြစ်သင့်သည်သာမကမင်္ဂလာဆောင်ညလည်းဖြစ်သည်။ အခိုက်အတန့်လေးပါ၊
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 38 Next ကို 's Page
104 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,985 စက္ကန့်ကျော် Generate ။